Fifa oo samaynaysa gudi musuqmaasuqa la dagaalama - BBC Somali
Fifa oo samaynaysa gudi musuqmaasuqa la dagaalama
Hay'adda Ciyaaraha Kubadda Adduunka ee Fiifa ayaa samaynaysa gudi 11 xubnood ka kooban oo dib u qaabayn ku samayn doona hay'adda oo ay hadhaysay fadeexad.
Dib u habaynta lagu samayn doono waxaa ka mid ah in la sameeyo shuruuc xadidaysa inta uu madaxwaynaha hay'addaasi xilka hayn karo, sidaasi waxaa ku dhawaaqay madaxwaynaha Fifa Sepp Blatter.
Fifa waxaa ay qaban doontaa kala fadhi aan caadi ahayn oo ay ku dooranayaan madaxwayne cusub kaas oo dhici doona 26 bisha labaad ee sanadka 2016.
Blatter oo 79 jir ah waxuu ku dhawaaqay bishii lixaad ee sanadkan in uu xilka ka dagayo afar maalmood uun kaddib markii uu madaxwaynenimada dib loogu soo doortay.
Maxay tahay sababta isbadal loogu baahanyahay?.
Iscasilaadii Blatter ee labadii bishii lixaad waxa uu dabo socday todobo sargaal oo Fifa ka tirsan oo loo xiray baadhitaan musuqmaasuq oo ay Maraykanku wadeen kaas oo afar iyo toban ruux lala xiriiriyay.
Dacwadii labaadna waxaa furay dacwad oogeyaal reer Switzerland ah kuwaas oo baadhitaan ku bilaabay sidii ay u dhacday doorashadii cida martigalinaysa Koobka Kubadda Cagta Adduunka ee sanadka 2018 iyo 2022, kuwaas oo lagu kala qabanayo Ruushka iyo Qadar.